समृद्ध गलकोट हाम्रो चाहना – News Portal of Global Nepali
समृद्ध गलकोट हाम्रो चाहना
22nd May 2017 मा प्रकाशित
रेणुका काउचा मगर, उपमेयर, गलकोट नपा बाग्लुङ
समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गरियो भने के हुन्छ ? यो प्रश्न परीक्षण हुन पाँच वर्ष पर्खिनै पर्छ । किनभने स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचनमा अधिकांश युवा नेतृत्व पुगेका छन् । बाग्लुङको गलकोट नगरपालिकाको उपमेयरमा युवा नेतृ रेणुका काउचाले जित हात पारेकी छन् । ३० वर्ष नकटेकी काउचाको वाक्पटुकतामा मात्र अब्बल होइन, व्यवहार पनि एक्सन ओरिएन्टेड छ भनिन्छ । यिनै विषयमा काउचासँग कुमार राउतले गरेको कुराकानी :
० उपमेयर निर्वाचित हुनुभयो सर्वप्रथम बधाई र शुभकमना ।
० कति वर्ष लाग्नुभयो ?
– ३० वर्ष लागें, यो विषयमा चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ ।
० जित्छु भन्ने लागेको थियो ?
– पूर्णरूपमा आत्मविश्वास थियो, तर यति धेरै अन्तरले विपक्षी पराजित हुन्छ भन्ने लागेको थिएन ।
० पराजित अन्तर धेरै भयो ?
– मेयरको थोरै भए पनि मैले चाहिँ ६ हजार ९९ मतको अन्तरले जितेकी हुँ ।
० लोकप्रिय हुनुहुँदो रहेछ ?
– म लोकप्रिय त हुँदै हुँ, मभन्दा पनि यो क्षेत्रमा नेपाली कांगे्रस लोकप्रिय छ ।
० जनमोर्चा र एमालेको संगठन बलियो भएको क्षेत्र होइन यो ?
– उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, तर नेपाली कांगे्रसजस्तो लोकप्रिय हुनुहुन्न ।
० तपाईं लोकप्रिय हुनुको कारण ?
– विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी हुँ । स्ववियु, मगर विद्यार्थी र अहिले महिला संघको केन्द्रीय सदस्य छु । अहिले युवाहरूलाई बढी रुचाइँदो रहेछ । त्यसो त मेरो राजनीतिक इमान्दारिता, मप्रति जनताको विश्वासले सम्भवतः यिनै कारण म लोकप्रिय भएको होला ।
० जातीय राजनीतिमा पनि हुनुहुँदो रहेछ ?
– हो, हाम्रो परिवेशमा मगर र तामाङ समुदाय पछाडि परेका छन् । आफ्नो हकअधिकारलाई स्थापित गर्न मैले जातीय संगठन रोजेकी हुँ । उनीहरूलाई पनि मूलधारमा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसैले हामीले बढी शैक्षिक मुद्दामा जोड दिएका छौं ।
० कांगे्र्रस कसरी बन्नुभयो ?
– यो पार्टीमा मेरो हजुरबुबादेखिको लगानी छ । बीपीको समाजवादको दर्शन पढेर कांगे्रस बनेको पनि होइन । बाल्यकालमा बुझेर कांगे्रस राजनीतिमा फाल हानेको होइन, बीपी जयन्ती तथा अन्य कार्यक्रममा हजुरबुवा जानुहुन्थ्यो, म पनि उहाँसँगै जान्थें । स्कुल पढ्दासमेत मलाई कांगे्रसको राजनीतिप्रति खासै चासो थिएन । तर कलेज पढ्न थालेपछि पर्वतकी कसुम थापा दिदीलाई मलाई स्ववियुको राजनीतिमा संलग्न हुन पे्ररित गर्नुभयो ।
० राजनीतिमा संलग्न नहुँदा कलेजका दिन कसरी बित्थ्यो ?
– अध्ययन अध्यापन त छँदै थियो, त्यससँग खेलकुदमा पनि रुचि राख्थें, भलिबल खेल्थें । उम्मेदवारको टिकट पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, संगठनले उम्मेदवार बनाउँदा भिड्नुपर्छ भनेपछि राजनीतिप्रति चासो राख्न थालेकी हुँ ।
० कुन कलेज पढ्नुभयो ?
– सरस्वती क्याम्पस पढें, त्यहाँबाट एमबीएको अध्ययन सकेपछि अहिले कानुन क्याम्पसमा एलएलबीको अन्तिम वर्ष अध्ययन गर्दैछु । सरस्वती क्याम्पस पढ्दा स्ववियुको कोषाध्यक्ष थिएँ ।
० अब पढ्नु हुन्छ कि जनताको सेवामा लाग्नुहुन्छ ?
– एलएलबीको अन्तिम वर्षको परीक्षा दिन बाँकी छ । त्यसअघि पनि कलेज गएर पढ्न पाइनँ । अब अन्तिम वर्षको परीक्षा लेख्छु, जनताको सेवा गर्दै अध्ययन पनि सक्छु ।
० चुनाव जित्नुअघि जनतालाई के भन्नुभएको छ ?
– झुटो आश्वासन दिएको छैन, कम्युनिस्टले जस्तो सपना बाँडेकी छैन । गर्न सक्ने काम गर्छु, आफ्नै साधनस्रोतको उपयोग गरेर समृद्ध गलकोटको अभियानमा जनताको साथ मागेकी छु ।
० यो काम चाहिँ गर्छु भन्नुभएको होला नि ?
– हामीकहाँ पिउने पानीको समस्या छ, पानी पिउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारबाट कोही वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । विकास भनेको बाटो हो, एडीबीले सबै वडामा बाटो त पु¥याएको छ, त्यसको स्तरोन्नति सम्भव भएसम्म प्रयास हुनेछ ।
० तपाईंले गर्न चाहेको ?
– आवश्यकताअनुसार काम गर्दै जाने हो, हाम्रो लक्ष्य भनेकै समृद्ध गलकोट निर्माण हो ।
० उपमेयरको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी छ ?
– उपमेयरले न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्ने हो, यद्यपि त्यसबारे निर्देशिका आइसकेको छैन । निर्देशिका आइसकेपछि र कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो । अहिले काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अन्योलता छ, त्यसैले अधिकारका बारेमा बहस गर्न उचित होलाजस्तो लाग्दैन ।
० उपमेयर बन्छु भनेर कानुन पढ्नु भएको हो ?
– मेरो अध्ययनसँग निर्वाचित पदको कुनै साइनो छैन । एउटा नागरिकले देशको नियम, कानुन र संविधानबारे जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कानुन पढेकी हुँ । विशेषतः देश संघीयतामा जाँदै गर्दा कानुनको विषयमा ज्ञान राख्नुपर्छ भनेरै ‘ल’ क्याम्पसमा भर्ना भएकी थिएँ ।
० तपाईंको नगरमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
– समग्र नेपालका महिलाको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ । तर परिवर्तनको रफ्तार बढिरहेको छ । मेरी आमाले जुन समस्या भोग्नुभयो, मैले भोग्नु परेको छैन । समाज परिवर्तनशील छ, त्यहीअनुरूप नेपाली महिलाहरू पनि परिवर्तित र आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेका छन् । महिला शिक्षा र आत्मनिर्भर समृद्धिको एउटा पाटो हो भन्ने मैले बुझेकी छु ।
० कतिको सम्भव छ ?
– युवा नेतृत्वले केही गर्न सक्छन् भन्ने जनतामा विश्वास छ । स्थानीय सीप, साधन र स्रोतको उपयोग गरेर समृद्ध गलकोटको अभियानमा जनताको सहयोग माग्छु सम्भव भएसम्मको काम गर्ने प्रयास गर्छु ।
० गलकोटवासीलाई केही भन्नुछ ?
– मलाई जुन आशा, भरोसा र विश्वासले उपमेयर पदमा जिताउनुभयो, धन्यवाद । यो जित परिवर्तन र समृद्ध गलकोटका लागि हो । उहाँहरूको आशालाई म तुषारापात हुन दिने छैन । म कुराभन्दा काममा विश्वास राख्ने भएकाले गलकोटवासीको चाहनामा ठेस पुग्ने काम गर्दिनँ ।
– यस्ता निजी कुरा नसोध्दा राम्रो हुन्छ, किनभने सकारात्मक सोचले यो प्रश्न गर्नुभएको भए पनि नकारात्मक अर्थ लगाउने हाम्रो समाजमा धेरै छन् । समाजमा मैले जुन राजनीतिक हैसियत बनाएको छु, त्यो मेरो अनुशासन, इमान्दारिता र क्षमताले हो । मेरो अनुशासन र इमान्दारितामा घुन पुतली लाग्न दिन्न ।
० जुन प्रोफाइल बन्दैछ, त्यसका लागि योग्य बर पाउन मुस्किल होला नि ?
– विवाह कसैको इच्छामा निर्भर रहँदैन, विवाह एउटा संयोग हो । त्यसैले यस विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । महिला आर्थिक रूपले सक्षम भएपछि विवाह गर्दा राम्रो हो ।
० सृष्टिलाई निरन्तरता दिन पनि विवाह आवश्यक होइन र ?
– व्यक्तिगत इच्छाका बारेमा जबर्जस्ती बोल्न नलगाउँदा राम्रो होला ।